Videogames ... rairo yekuraira BASH yako | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchida dzidza uye yeuka mirairo nenzira iri nyore, kana iwe unotanga kuita seunopenga muBASH yekuparadzira kwako kweGNU / Linux kana uri kutsvaga imwe nzira inonakidza yatichazotaura nezvayo pano. Iyi ndiyo mimwe mitambo inonakidza kana zvekuvaraidza zvemutsetse wekuraira uyo unogona kutibatsira kudzidza tichitamba uye kutiyeuchidza izvo zvinoitwa nemimwe mirairo. Haasi iwo chaiwo mitambo, asi iwo akagezwa shanduro dzeiyo Linux yekuraira zvidzidzo.
Saka zvinogona kuve zvinonakidza kune imi mese munoda dzidza kutamba, kana kudzidzira bvunzo seLPIC, LFCS, nezvimwe. Kana iwe uchida kuziva aya maratidziro, ikozvino tave kuzokupa iwe muLxA zvimwe zvezvakanakisa zvaunowana, isu tinongoda kuti iwe udzidze zvakawanda navo uchinakidzwa. Uye kune izvo iwe unofanirwa kuwana iyo webhusaiti ye wargaming.
Mukati mewebhu peji iwe uchaona zvese mitambo iripo izvo zviripo, sezvauri kuona kune akati wandei, uye yega yega ine chiteshi cheSSH chaunogona kubatanidza kuti utange kutamba. Zviripachena usatarisira moyo kurwisa magirafu, iwo ese ari marongero emutsara akavakirwa mitambo uye akanyanya epamberi magiraidhi aunozoona iwo angave mamwe debujos pakoni nemavara ... asi izvo hazvireve kuti iwo anoshanda kwazvo kudzidza.
Pindai iyo mitambo zviripo tinogona kuratidza:
Mukati mewebhu iyo yatinoratidza pakutanga iwe unowana rondedzero izere yemitambo, kana iwe ukabaya iwe unoratidza akasiyana mazinga eiyo yega, ayo akawandisa. Uye iwe unogona zvakare kuwana iyo ruzivo rwe kubatana ne SSH uye chiteshi, pamwe neruzivo pamirairo yekushandisa, nezvimwe, kana iwe unogona kungozvibvunza wega uye kuenda kunoedza ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Videogames… raira tambo yeBASH yako
Kutenda neruzivo, wanga uchiri kuridza uye zvinonakidza kwazvo.